अधुरै रहयो सन्तानलाई संसार देखाउने सपना ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अधुरै रहयो सन्तानलाई संसार देखाउने सपना !
२०७६, शुक्रबार काठमान्डौ । धरान स्थित वीपी कोईराला विज्ञान प्रतिष्ठानमा डे’लिभरी गराउन गएकी इटहरीकी लक्ष्मी बुढाथोकीको सन्तानलाई संसार देखाउने सपना अधुरै भएको छ । गत १२ गते बच्चा जन्माउन धरान पुगेकी इटहरी ४ की बुढाथोकीको अस्पताल्मै निधन भए संगै उनको सपना अधुरै भएको हो । बुधबार ७ बजे सम्म आमा र बच्चाको अवस्था राम्रो छ डाक्टरले भनेका थिए मृ’तकका छिमेकी विक्रम थापाले भने । तर हिजो राती करीब एक बजे तिर आमा र बच्चाकै नि’धन भएको भन्दै अस्पतालले ग’म्भिर त्रु’टि गरेको बताए ।